Dowladda Soomaaliya oo dacwo ka gudbisay Kenya | KEYDMEDIA ONLINE
Dowladda Soomaaliya oo dacwo ka gudbisay Kenya
Dowladda Fadaraalka Soomaaliya, ayaa Golaha Ammaanka ee QM u gudbisay eedo iyo caddeymo muujinaya duqeynta diyaaradaha Kenya la beegsadeen dad shacab dan-yar ah ah oo oo ku dhaqan gobalka Gedo
MUQDISHO, Soomaaliya - Danjiraha Soomaliya u qaabilsan Qaramada Midoobay Abuukar Daahir Cusmaan ‘Baalle’ ayaa Golaha Ammaanka u gudbiyay, eedo hor leh oo ka dhan ah Dowladda Kenya.
Safiirka Soomaaliya wuxuu Kenya ku eedeeyay in ay dhibaato ku heyso gobolka Gedo, wuxuuna soo bandhigay caddeymo muujinaya duqeymo diyaaradaha Kenya ay u geysteen shacab u badan caruur iyo haween aan waxba galabsan.
Tallaabadaan ayaa noqoneysa, markii ugu horreysay ee Dowladda Soomaaliya ay Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay geyso eedo la xariira dhibaatada Ciidamada Kenya ku hayaan gobollada Gedo iyo Jubbooyinka.
Tan iyo markii Ciidanka Difaaca Kenya, gudaha u soo galeen Soomaaliya 2011-kii, waxa ay wadeen weerarro ka fiirsi la’aan ah, oo waxyeelo ba’an ka soo gaaraysay shacab u badan xoolo dhaqato.
Billaawgii todobaaadkaan ayay ahayd, markii ay Keydmedia Online, baahisay in diyaaradaha Kenya ee aan duuliyaha lahayn ay duqeeyeen guri ay deganaayeen dad rayid ah taas oo sababtay qasaaro dhimasho iyo dhaawac leh oo soo gaaray qoska gantaallada lala beegsaday.
Marka laga yimaado duqeymaha ka dhanka ah danyarta, ciidanka Kenya waxa ay si joogto ah u burburiyaan xarumaha ganacsi ee ay ugu horreeyaan xarumaha is gaarsiinta, taas oo u jeedka ay ka leeyihiin ay tahay in shirkadda Safaricom ee Kenya laga leeyahay ay dhaqaalo ka sameyso degaannada dhaca xuduudda.
Arrintaan ayaa imaaneysa ayadoo maalmihii u danbeeyay uu soo hagaagayay xiriirka labada dal, Dowladda Soomaaliya ayaana Kenya ku war galisay in aysan gudaha Soomaaliya ka fulin karin duqeyn iyaga oo aan soo wargalin Dowladda Fadaraaalka iyo Taliska AMISOM.